I-WordPress: I-Plugin engu- # 1 yonke indawo KUFANELE ibe | Martech Zone
I-WordPress: I-Plugin engu- # 1 yonke indawo KUFANELE ibe nayo
NgoLwesine, Januwari 4, 2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Namuhla isiza sami sidiliziwe !!! Angiqiniseki ukuthi imaphi ama-spambot angibambile, kepha bebelokhu bebulala iwebhusayithi yami usuku lonke. Lawa angama-spam-bots okuphawula azama kaninginingi ukuthumela ugaxekile wamazwana. I-WordPress ayinakho ukuvikelwa kulolu hlobo lokuhlaselwa. Futhi Akismet kusiza kuphela EMVA kokuthunyelwa kogaxekile kwamazwana.
Bengidinga okuthile obekungaphika okuthunyelwe futhi yilokho kanye Ukuziphatha Okubi i-plugin iyakwenza.
Nakhu ukuphazamiseka kwalokho ekwenzayo:
Ukuziphatha Okubi iqoqo lezikripthi ze-PHP ezivimbela ama-spambots ekufinyeleleni kusayithi lakho ngokuhlaziya izicelo zawo zangempela ze-HTTP bese uziqhathanisa namaphrofayli avela kuma-spambots aziwayo. Idlula kude i-User-Agent ne-Referer, noma kunjalo. Ukuziphatha Okubi kuyatholakala ngamaphakeji wesoftware asuselwa ku-PHP, futhi angahlanganiswa ngemizuzwana kunoma yimuphi umbhalo we-PHP.
Ukufakwa kwe-Plugin kwakungeyona ingozi futhi isiza sami senziwe isipele. Ngenhlanhla, Ukuziphatha Okubi isivele ivimbele ukuhanjiswa okungaphezulu kwama-50 selokhu ngiyifakile cishe emizuzwini eyi-10 edlule. Isiza sami sesivele senza kangcono kakhulu ngoba umsebenzi we-database uphansi kakhulu. Futhi, ulayini wami we-Akismet ngeke ugcwalise ngokushesha okukhulu manje.
Ngidlule kwisayithi ngayinye yamakhasimende ami kulobubusuku futhi ngafaka i- Ukuziphatha Okubi Xhuma. Angifuni ukuthi babe nohlobo losuku ebenginalo! Ngizobabeka futhi engqondweni nabanye ubuchwepheshe, Ukuziphatha Okubi ithuthukise ubuchwepheshe bayo kuzingxenyekazi eziningi ezahlukahlukene.
Uyacelwa ukuthi ungakhohlwa ukuphonsa imali ethe xaxa nakulabo bantu. Ngiyakutshela ukuthi ukuphuma kwanamuhla kumasayithi ama-4 engikhuphukile kungibize ama-90% wemali yami ejwayelekile yansuku zonke… (ngakho-ke angikwazi ukuthenga i-Starbucks yami namuhla!)
QAPHELA: 1/8/2007 - Elinye lamakhasimende ami lalinenkinga lapho lalinqatshelwa ukuxhumana ngekhasi lokungena ngemvume. Ngibukeza amanye amasayithi ambalwa, ngithole ukuthi i-Bad Behavior nayo yakhelwe emsebenzini we-Whitelist. Kufanele uhlele ifayela, mhlophe.inc.php, bese ufaka ikheli le-IP elivinjwe kumakheli afanayo e-IP.
Uma ungaqiniseki ngekheli le-IP elivinjiwe, ngikwazile ukubuza i-database ngisebenzisa lo mbuzo:
KHETHA * KUSUKELA `kusuka ku` wp_bad_behavior` lapho `isicelo_uri` sithanda '% login%'
Tags: yokuziphatha okubiuhlu lwabantu abamnyamaimibono ye-blogugaxekile wamazwanaamazwana ogaxekileumhlophe
Ukugqekeza kumaSayithi aphezulu ayi-100,000 e-Alexa
I-RSS: Yenza isixhumanisi sakho sokuphakelayo sivele
Jan 6, 2007 ngo-1: 22 PM
Futhi unyaka omusha ojabulisayo. Siyakuhalalisela ngokwenza okuphezulu okungu-100.000!
Futhi ngiyabonga ngokungikhumbuza ngokuziphatha okungalungile. Bengicabanga ukuthi ngiyifakile futhi bengicindezelwa inani lamazwana ogaxekile engiwatholile ezinsukwini ezimbalwa ezedlule. Futhi, lapho ngibheka izibalo zami (ezithobeke kakhulu kunezakho), ngibonile ukuthi umthamo omkhulu webhulogi lami uvela kusiphequluli esingeyona ingxoxo; Ama-bots wogaxekile ngamanye amagama.
U-Askimet uvimbe cishe imizamo engama-70 yokuphawula ngosuku kulezi zinsuku ezimbalwa ezedlule.
Noma kunjalo, ngemuva kokufunda i-athikili yakho, ngiphinde ngabheka amasethingi ebhulogi, futhi - nephutha elijwayelekile lasebusuku - ngabona ukuthi nami ngikhohliwe ukwenza kusebenze i-plug-in. Manje sekuyasebenza futhi ngiyafisa ukwazi ukuthi izibalo zizohamba kanjani.
Jan 8, 2007 ngo-11: 54 PM
Ngiyabonga ngokungikhombisa le plugin uDoug. Ngibonile ukuphawula kwami ​​kogaxekile kwehla kakhulu selokhu ngakufaka.
Jan 12, 2007 ngo-1: 23 PM
ngincamela ugaxekile karma 2.2
Jan 22, 2007 ngo-2: 50 PM
Kuzwakale ukuthi amanye ama-blogger abe nenkinga nge-plug-in, anciphisa uhlelo lwawo, abangela umthwalo owengeziwe kuseva.
Nangu umdidiyeli osebenza kwenye ipulagi yokulwa nogaxekile ku: